Yonwabela ukutya kwevegan nge-Emilia's Vegan Recipe Mac app | Ndisuka mac
Okwethutyana ngoku, ukwazile ukubona ukuba awuzenzeli ngokwakho, abanye babahlobo bakho baba yimifuno, engafaniyo nemifuno. Njengoko sinokufunda kwiWikipedia, i-veganism yinto leyo uyala ukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kwazo zonke iimveliso okanye iinkonzo zemvelaphi yezilwanyana, Ngamanye amagama, uyayeka ukutya naluphi na uhlobo lwenyama kunye neemveliso zezilwanyana ezinje ngobisi, amaqanda, ubusi, itshizi ... Ngokuqinisekileyo ezivenkileni sele uqalile ukubona amacandelo eemifuno, amacandelo apho unokufumana ubisi lwerayisi, isoya ubisi, i-tofu burger.
Kungenzeka ukuba ucinga ukuba kutheni isihogo ndithetha ngale ndlela intsha yokutya kwiSoy de Mac.Kulungile, njengayo yonke enye into, kuhlala kukho isizathu, kwaye eso sisicelo seEmilia's Vegan Recipe esifumaneka simahla Iwebhusayithi yeMac App Store, Isicelo esinexabiso eliqhelekileyo le-1,99 euroAyisiyonto ingako, kodwa ihlala ilungile ukusebenzisa isibonelelo esingaqhelekanga.
Iresiphi yeVegan evela kuEmilia, Inikezelwe kwi-vegan cuisine kwaye isinika iindlela zokupheka ezilula nezikhawulezayo ukulungiselela. Uninzi lwezi ndlela zokupheka ziphantsi kumanqatha kunye neswekile. Zonke iiresiphi zahlulwe zangamacandelo ngomxholo, ezinje ngeerayisi izitya, iikeyiki zeziqhamo, izitya zepasta, iicookies, iisaladi, iipizza, iilekese, iiroll ...
I-interface ishiya kancinci ukuba inqweneleke, kodwa kufuneka ndivume ukuba singafumana inani elikhulu lezitya eziya kuvuyisa zonke iivenji. Ukongeza, nganye iresiphi esinokwabelana ngayo Ngokukhetha okwahlukileyo okunikezelwa yimenyu yokwabelana nge-Mac.Iresiphi yeemgan ye-Emilia iyafumaneka ngeSpanish egqibeleleyo, ke umqobo wolwimi awunangxaki ukuyikhuphela kwaye ulungiselele izicwangciso ze-vegan ngokulula nangokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Yonwabela ukutya kwevegan nge-Emilia's Vegan Recipe Mac app